जनता हामी नै हौं....
पूर्वदेखि सुदूर पशिचमसम्मका राजमार्गहरुमा लावालस्कर छ पैदलयात्रीको । आफ्नो थाँतथलोभन्दा बाहिर गएर रोजीरोटीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले अधिकांश श्रमजीवी आफ्नो पुख्र्यौली थलो भन्दा बाहिर जान बाध्य छन् । अझ कतिपयले त लाखौंको संख्यामा, मुलुकनै छोडेर बाहिर गएर आफ्नो परिवारको लालनपालन गर्ने गरेका छन् । दुर्भाग्य, अहिले विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा ती सबै आफ्नै मुलुक, त्यो पनि आफ्नै बासस्थानमा फर्किन बाध्य छन् । कोरोना महामारीलेगर्दा कामधन्दा बन्द भएपछि आफ्नै मुलुकबाट र विदेशबाट समेत लखेटिन बाध्य छन् नेपालीहरु ।
अफसोच, दुई तिहाइ बहुमत भएको नेकपाको सरकार आफ्नै मुलुकको विभन्न भूभागबाट र विदेशबाट समेत कामबाट बेदखल भएका घर फर्कन बाध्य परिवारप्रति उदासीनता देखाइरहेको छ । तिनीहरुको व्यवस्थापन, खासगरी नेपालभित्रै पलायन भएकाहरुको, स्थानीय तवरबाट गर्ने कोशिश भएको तर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । यसप्रति मौन छन् । हिडेरै आआफ्नो गन्तव्यतिर फर्कन लागेकालाइृ उति व्यवस्थापन गरिदिनु भन्ने झारा टर्ने किसिमको वक्तव्य सत्ता र प्रतिपक्षी दुबैतिरबाट माएका छन् । प्रहरी र मनकारीहरुले सहायता गरे तर सरकार र प्रतिपक्षी केही गर्न तैयार देखिदैन । सर्वोचच अदालतले समेत सुरक्षितसाथ घरघर पु¥याउन आदेश दियो, सरकारका प्रधानमन्त्री हिड्न नदिनु, खानबस्न दिनु भन्ने फर्मान जारी गर्छन्, पैदलयात्रुहरु भोकभोकै असरल्ल देखिनछन् । दुधे बालक च्यापेर, गर्भवती दश बार दिनको पैदल हिडिरहेका छन् । भोक, प्यास, दुःख पीडा सहन बाध्य छन् । सरकार र जनप्रतिनिधिहरु देखान हेरिरहेका छन् ।
अझ विदेशमा रहेका नेपालीहरुको पीडा त कहालीलाग्दो नै छ । मालिकले कामबाट निालिदिएपछि खान बस्न नपाएका र बेखर्ची भएकाहरुहरु छटपटिएका छन् । नेपाल सरकार र ती देशमा रहेका दूतावास यो सब हेरिरहेका छन् । आफ्नै मुलुकको राजमार्गहरुमा छटपटिदै हिडेकार्ला नदेख्ने सरकारले विदेशमा पुगेकालाई के देखोस् ? नेपालम ारहेका आफ्ना तीन जना नागरिकलाई यहाँबाट निकाल्न भुटानले विमान नै पठायो, अरु मुलुकले चार्टर गरेर आफ्ना नागरिकको उद्धार गरे, विदेशमा अभरमा परेका नेपाललाई जहाँ छौं त्यहीँ बस, त्यहीको नियम पालना गर भनेर नेपाल सरकार कर्तव्यच्यूत भइरहेको छ । चुनावमा यिनैलाई मत दिन्छन्, आज राजमार्गमा अलपत्रमा परेकाहरु चुनावका बेलामा यो सब बिर्सन्छन् । सत्तामा बस्नेहरु भ्रष्टाचारमा व्यस्त छन् । महामारीमा कमाउन दौडादौड गरिरहेका छन् । राहत वितरणमा समेत जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्टाचार गरेका सप्रमाण भेटिए । कोरोना महामारीसँग जुध्न विदेशीसँग ४ अर्व ऋण लिइसक्यो सरकारले । त्यो पैसा पीडितको हातमुखसम्म पुगेको छैन । आन्तरिक रुपमा पनि अरवौं उठेको छ, राजधानीमै गरीवहरु भोकभोकै छन्, दूरदराजमा के हालत होला ?
एकातिर यस्तो विषम परिस्थिति छ भने अर्कोतिर आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न सुकुम्वासी आयोग गठन गरेर सरकारले तमासा देखाएको छ । सबै काम छाडी पुच्छरमा हात भनेको यही हो । मर्ने बाँच्ने ठेगान नभएका बेलामा सरकार भ्रष्टाचार गर्ने नयाँ नयाँ बाटो खोजिरहेको छ । प्रचण्डपुत्रीसँग धाँधली गरेर हराइएका देवी ज्ञवालीलाई यही आयोगमा सत्ता खान्की मिलेको छ । मेयरको सोधभर्ना त्यो पनि यस्तो महामारीको बेलामा लिने खाने देवी ज्ञवाली पनि अचम्मका पात्र देखिएका छन् ।
औषधि खरिददेखि लिएर राहत सामग्री वितरणमा समेत भ्रष्टाचार । फेरि जनताप्रति एकरत्ति पनि दायित्व वोध छैन । लक डाउन घोषणा गरेर पटक पटक अवधि बढाएर सरकारले जनताप्रतिको दायित्व पूरा गरेको बताइरहेछ । के भन्ने ? यतिसम्मको नालायकीले व्यवस्था बदनाम भयो, नेताहरु बदनाम भएका छन् । जनताले यसको हिसाव राख्नुपर्छ ।
कोरोना महामारी अन्त्य भएपछि अर्को परिवर्तन जरुरी छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते आएको भूकम्प, त्यसपछि बढेको भ्रष्टाचार र बेथिति, अहिले कोरोनाको महामारी र भ्रष्टाचार । नेपालीले पहिले बिर्से, अव बिर्से भने जनताले अरु दुःख पाउने निश्चित छ । जनता पहिलेजस्तै हुने हो भने नेताहरुले देशमा अरु अराजकता र भ्रष्टाचार बढाउने निश्चित छ ।
यस्तो बेलामा सरकार परिवर्तनको भित्री खेल सुरु गरेका छन् प्रचण्डले । माधव नेपालको नेतृत्वमा साझा सरकार बनाउने प्रपञ्च छ प्रचण्डको । प्रतिपक्षी पनि यसैमा लागेको देखिन्छ ।नेकपाकै सञ्चारमाध्यममा यस्ता समाचार आइरहेका छन् । भोलि भोलि हुने चुनावमा यस्तैलाई भोट दिने कि जनताले कडा निर्णय गर्ने ? यस्ता नेता जसले जनताको साथ दिएनन्, त्यस्ताको काँध अव जनताले थाप्नु जनताकै अपमान हुनेछ ।